Nin diiday in uu salaan ka qaado sheefkiisa oo magdhow la siiyay	By Jimcale • May 20, 2013Kamuunka Trollhättan ayaa go’aamiyay in lacag gaareysa 30.000kr la siiyo nin Soomaali ah oo diiday in uu salaan ka qaado madaxa shaqada ee qeybta isdhexgalka. …
haye answered Last week
Diyaar waxaan u ahay in aan ku laabto Somalia ee sideen ku helaa?
Maxaa ka qaldan dhalinyada Soomaalida ee ku nool Sweden?
By Jimcale • May 15, 2013 Bilihii la soo dhaafay waxaan u badnaa dhinaca Stockholm oo aan u tago arimo shaqo, Stockholm oo ah magaalada ay ku noolyihiin Soomaalida ugu badan …
By Jimcale • May 14, 2013 Magaalada Borlänge ayaa waxaa looga dhawaaqay koox ciyaari doonta kubada Bandy oo ku ciyaari doonta magaca wadanka Somalia. Kooxdaan oo uu hogaamiye u noqon …